Ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny fitsangatsanganana any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny fitsangatsanganana any Eropa
Eritrereto hoe mikasa ny hitsidika ny Vondrona eropeana ianao ato ho ato. Raha izany, misy andiana toro-hevitra ary fampahalalana momba ny dia lehibe izany dia hanampy amin'ny fanaovana izay hahafinaritra kokoa ny fiainanao. Mety hisy hieritreritra fa tsy misy ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny fiheverana ilaina handehanana any Eropa raha oharina amin'ny toerana hafa rehetra eto an-tany. Na izany aza, ao anatin'ny fanitarana midadasika azy io, misy andiana taratasy ara-dalàna ilainao ilaina hatao any Eropa ho mpizahatany. koa, samy hafa be ny toetrandro, quirks, ary ny mombamomba ny kolontsaina dia ilaina ao an-tsaina ao.
1. Fitsangatsanganana any Eropa: Raiso Ahold ny pasipaoronao
Ny pasipaoro no zava-dehibe indrindra satria ny karatra fampisehoana sy ny lakilen'ny firenena fandraisanao azy. Izahay no hikarakara ny pasipaoro aloha. Ny governemantanao voalohany dia mamaritra hoe firenena iza no azonao idirana nefa tsy mila manodina karazana taratasy manokana. Ny tsara indrindra dia ny manamarina hatrany raha toa ka manana fifandraisana ara-diplomatika na fifanarahana amin'ny masoivoho any an-tranonao sy ny masoivohonao amin'ny fotoana itetezanao. Ny ankamaroan'ny firenena avy any Amerika sy Azia atsimo atsinanana dia manana fidirana tsy voafehy amin'ny ankamaroan'ny firenena any Eropa.
Rehefa avy nilaza an'io, raha tsy izany no izy; mahazo mpanolo-tsaina fitsangatsanganana ara-dalàna izay afaka mitarika anao mandritra ny fanodinanao ny fahazoan-dàlana hivezivezinao. Mety mila mari-pankasitrahana ara-pahasalamana ihany koa ianao raha te hahazo fidirana. Raha tianao ny mitondra fiara mandritra ny any ivelany, mila an fahazoan-dàlana mpamily iraisam-pirenena. Raha mikasa ny hanao orinasa ianao, mety misy fahazoan-dàlana iraisam-pirenena maro hafa ilaina amin'ny dia. Azonao atao ny manamarina izay antontan-taratasy ilaina araka ny fikasana fivezivezenao ao amin'ny tranokalan'ny firenena mandray.
2. Mianara manangona entana mifanaraka amin'izany
Eropa dia kaontinanta lehibe sy miovaova, manomboka amin'ny morontsiraka Andalucia, any Espaina, ka hatrany amin'ny Tundra atsinanana misy lanezy. Zava-dehibe ny fonosana ao an-tsaina ny toetrandro sy ireo hetsika kasainao hatao any ivelany. Tadidio fa tsy manangona entana ianao hialana amin'ny taninao, aza maka be na kely; izany dia hahatonga anao tsy hanana fotoana firy haka akanjo, manampy anao amin'ny làlana mankany amin'ny seranam-piara-manidina, ary na dia hamonjy anao vola ny fisorohana ny sarany matavy loatra. Ny tsara indrindra dia ny mandamina ny kitaponao na ny fomban'ny tafika valizy, manodina ny pataloha, lobaka, ba kiraro, ary atin'akanjo toy ny croissant ary apetraho matevina mifanohitra izy rehetra. Izany dia misoroka ny fanahiana amin'ny fametahana ny akanjonao ary mamonjy anao hanana toerana sahaza ny vokatra fidiovana na elektronika. Ilaina ihany koa ity tendrony ity raha mitady hitondra akanjo novidinao tamin'ny dia nataonao ianao. Torohevitra tsara hafa dia ny manangona kitapo fanampiny ho an'ny fanomezana na zavatra fiantsenana.
3. Fitsangatsanganana any Eropa: Ampahafantaro ny bankinao fa ho any ivelany ianao ary handany vola
Ny fihoaram-pefy tamin'ny hacking tamin'ny carte de crédit izay nitranga taona vitsy lasa izay dia nahatonga ny banky hitandrina loatra amin'ny loza mety hitranga. Nahatonga azy ireo hanangana sakana aloha ny politika taty aoriana rehefa mahita ny carte de crédit ampiasain'ny firenena sendra azy ireo. Tsy maintsy miseho mivantana amin'ny bankinao ianao na miantso azy ireo satria ny fampandrenesana an-tserasera indraindray dia tsy raisina. Ny fandraisana an'io fepetra io dia hisoroka ireo traikefa manimba sy mahamenatra rehefa miantsena. Raha mankany amin'ny banky ianao dia tsara ihany koa ny mahazo vola eo an-toerana mandritra ny fotoana misy anao. Ny saram-panakalozana dia nampisondrotra hafahafa ho an'ireo mpizahatany any amin'ny ankamaroan'ny fivarotana any Eropa ary teboka fifanakalozana.
4. Fitsangatsanganana any Eropa: Famerenana indray
Raha mankany amin'ny "Continent taloha,”Tsarovy ny mitondra miaraka aminao ny antontan-taratasinao ary mandoa izay karazana permis iraisam-pirenena ilaina. Ilaina io karazan-taratasy io raha mikasa ny hitsidika firenena samihafa ao anatiny ianao ny lalàna eropeana. Raha mikasa hanao dia lavitra ianao, ilaina ny fananana fahazoan-dàlana mpamily iraisam-pirenena ary hisorohana ny famandrihana. koa, tadidio ny entana kely ary mba hijerena ny toetrandro sy ireo hetsika hiaretanao any ivelany. Tatero hatrany izay firenena kasainao handaniam-bola sy hanaovana fifanakalozam-bola afa-tsy amin'ireo orinasa manana alalana. Farany, mifandray amin'ny olona isan-karazany ianao, sakafo, kolontsaina, aza adino ny miala voly sy mankafy ny traikefa.
Fantatrao izao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao, izahay ao Save A Train, vonona hanampy anao amin'ny filanao lamasinina hafa rehetra.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fitsangatsanganana any Eropa” amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feverything-know-traveling-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Vondrona Eraopeanina eurotrip FAHALALANA TravelingToEurope traveltips